Ahoana ny famonoana otrikaina amin'ny tsindrona bokotra amin'ny kibo - Raiso ireto torohevitra ireto | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 12:00 | beauty
Fantatrao ve ny fomba famonoana otrikaina amin'ny tsindron'ny foibe? Satria io no iray amin'ireo fisalasalana lehibe manenjika antsika rehefa manao lavaka ao amin'ny vatana isika sy bebe kokoa, ao anaty iray toy ny foitra, dia misy fotony manangona na dia tsy tiantsika aza. Androany ianao dia hiala amin'ireo ahiahy mety hitranga rehetra ireo.
Mba hampisehoana azy io dia tsy maintsy manaraka andiana tolo-kevitra foana isika. Izy rehetra dia hisoroka ny aretina tsy hiparitaka ary hahafahantsika mampiseho ny firavaka faran'izay haingana. Eny tokoa, andramo ihany koa ny manaraka ny torolalana nomen'ny matihanina fa nataoko taminao izany satria manomboka amin'ny anay izao.
1 Inona no azoko atao mba hamonoana olona amin'ny famonoana olona
2 Ahoana no fanasitranana ny famonoana ny foitra
3 Ahoana no hahalalana raha voan'ny tsindron'ny foitra
Inona no azoko atao mba hamonoana olona amin'ny famonoana olona
Efa nandroso izahay fa ny fanindronan'ny foitra dia mety ho somary sarotra kokoa hihazonana ny aretina tsy hisy. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria faritra iray iangonan'ny loto ao anaty indray mipy maso. Ka mila mijery akaiky azy io isika ary averintsika indroa isan'andro ny fizotrany.
Raha hikasika ilay ratra ianao dia tsy maintsy manasa tsara amin'ny savony sy rano isika. Fa ity tsy misy menaka manitra fa aleo mifidy izay tsy miandany.
Ho an'ny faritra resahina dia ilaina ihany koa sasao amin'ny rano kely sy savony malefaka. Na dia asiana masira ara-batana aza. Tokony hofafazantsika azy io, hijerena fa mandoka tsara ny lavaka io.
Rehefa manadio azy io, Azonao atao ny mamindra ny fanindronana fa amin'ny fitandremana tsara ary hampiakatra na hampidina azy fotsiny, ka tsy misy crust eo anelanelany. Ny andro voalohany dia tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka satria io no ilantsika azy indrindra.
Rehefa madio dia mila maina ny faritra fa tsy hampiasa servieta na zavatra mitovy aminy. Fa tsara kokoa ny gazy ary manome fikasihana malefaka kely, hisorohana ny fisarihana, satria mety hanelingelina antsika izany.
Ahoana no fanasitranana ny famonoana ny foitra
Ho fanampin'ireo dingana voalaza teo, dia misy zavatra hafa tsy maintsy tadidintsika foana satria zava-dehibe ihany io. Noho izany, raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fanasitranana ny famonoana ny foitra, dia tokony ho fantatrao daholo ireto manaraka ireto:
Aorian'ny fanasana sy fanadiovana azy dia mety ihany koa ny mampiditra otrikaretina, hisorohana ny aretina mety hipoitra. Aza mihinana alikaola amin'ny ratra.
Amin'ny tsorakazo sofina ary lena ao anaty rano mafana, azonao atao ny manalefaka ny foza izay miseho indraindray. Raha tokony hisintona azy ireo isika ka hahatonga antsika ratra lehibe kokoa dia tsara kokoa hatrany ny manaraka an'io dingana io mba hanalana azy ireo mora kokoa.
Aza esorina ny fanindronana. Tsy maintsy afindrao araky ny efa natoronay azy ireo, fa avelao eo amin'ny toerany foana izy io raha tsy hoe ny dokotera no manoro hevitra azy.
Miresaka ratra iray izay matetika mila fotoana hanasitranana isika. Noho izany dia tokony hiandry roa na telo herinandro ianao alohan'ny handehanana any amin'ny pisinina ary raha mandeha ianao dia tsara kokoa ny manarona azy araka izay azo atao, mitazona izany hatrany amin'ny klôro.
Aza mitafy akanjo tery loatra amin'ity faritra ity, izay mety hikorontana amin'ny vatosoa na mety ho tratra mihitsy aza. Satria ny jerky dia tsy tsara mandritra ny fizotran'ny fanasitranana.
Ahoana no hahalalana raha voan'ny tsindron'ny foitra
Marina fa tsy ny olona rehetra no hanana ny fihetsika mitovy amin'izany. Fa eny, rehefa miresaka momba ny aretina amin'ny fanindrohana isika dia mazava fa misy andiana soritr'aretina izay tsy tokony hodian-tsy jerena.
Ny bokotra kibo dia ho mena noho ny mahazatra. Na dia marina aza fa ny andro voalohany dia mety hisy izany ary tsy misy aretina.
Ho hitanao fa misy hafanana bebe kokoa ao amin'ilay faritra ary hahita mamontsina ianao.
Ankoatra izany, rehefa mikasika azy ianao dia hijaly ary hanomboka ny nana manao endrika ivelany.
Amin'ny tranga efa tena henjana dia afaka manome tazo kely izy io, saingy azo antoka fa tsy fahita izany. Raha izany dia tokony hifampidinika amin'ny dokoteranao ianao.
Amin'ny fotoana rehetra dia mila manana faharetana kely ianao, satria ratra izany ary afaka herinandro na volana maromaro vao sitrana tanteraka. Fantatrao izao ny fomba famonoana otrikaina amin'ny famonoana foibe!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny famonoana otrikaina amin'ny famonoana ny foitra